E-Journal: Ubuntu ကို သုံးစေချင်တယ်
Ubuntu ကို သုံးစေချင်တယ်
Ubuntu ကို သိသူတွေလည်း အများကြီးရှိမှာပါ။ ကျနော်သိသလောက်လေးကို ပြောပြချင်လို့ ဒီပို့စ်ကို ရေးရခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ Ubuntu ဆိုတာ တောင်အာဖရိက စကားလုံးလို့ပဲ ပြောပါတော့။ သူ့အဓိပ္ပါယ်ကို ဝီကီပီးဒီယားမှာ "humanity towards others" လို့ပြောပါတယ်။ မြန်မာလို အဓိပ္ပါယ်ကတော့ လူသားခြင်းစာနာမှု လို့ပဲ ဆိုလေမလား။ သူ့အသံထွက်ကတော့ အူဘွန်းတူးလို့ ဆိုပါတယ်။ နည်းပညာပိုင်းတွေကို သိပ်မပြောဘဲ ကျနော်မြင်တဲ့ အပိုင်းလေးတွေကိုပဲ ပြောပြသွားပါမယ်။ စိတ်ဝင်စားလို့ ဆက်လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင် အင်တာနက်ပေါ်မှာ လွယ်ကူစွာ ရှာဖွေလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
အူဘွန်းတူးဆိုတာက ပိုက်ဆံမပေးရတဲ့ computer operating system တခုပါ။ Wikipdia မှာ အကျယ်ဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ အော်ပရိတ်တီးစစ်စတမ် (အိုအက်စ်) ဆိုတာက Microsoft က ထုတ်တဲ့ Windows XP, Windows Vista, Windows7တို့လို အမျိုးအစားတွေကို ပြောတာပါ။
Windows 7၊ Vista၊ XP တွေကို လူအများစုက လိုင်စင်ဗားရှင်းတွေကို ဝယ်သုံးနေကြသလားဆိုတော့ ကျနော့်အထင်ပြောရရင်တော့ မြန်မာပြည်တွင်း လူအတော်များများကတော့ ဝယ်သုံးဖို့ဆိုတာ ခက်ခဲတယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီတော့ ပိုင်းရိတ်ဗားရှင်း ဝင်းဒိုစ်တွေကို အသုံးများတယ်လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။ ကျနော့်အနေနဲ့ကတော့ ပိုင်းရိတ်ဗားရှင်း ဝင်းဒိုစ်အခွေတွေကို မသုံးစေချင်ပါဘူး။ ငါးပါးသီလထဲက အဒိန္နာဒါနာကံကို တတ်နိုင်သမျှ စောင့်ထိန်းစေချင်တာပါပဲ။
အူဘွန်းတူးထဲမှာ အင်တာနက်ဘရောက်ဇာအဖြစ် Mozilla Firefox ကိုသုံးတယ်။ စာစီဖို့၊ အတွက်အချက် ပရင့်ဆန့်တေးရှင်းလုပ်ဖို့တွေအတွက် OpenOffice.org 3.1 ကို သုံးထားတယ်။ vector graphics editor အတွက်ဆိုရင် Inkscape ကိုသုံးကြပါတယ်။ Photoshop လို အသုံးပြုချင်ရင်တော့ GIMP ကို သုံးလေ့ရှိကြပါတယ်။
သိပ္ပံသမားတွေအတွက်ဆိုလည်း Matlab နဲ့ဆင်တူတဲ့ Scilab၊ Mathcad နဲ့ ဆင်တူတဲ့ Maxima အလကားပေးတဲ့ ဆော့ဝဲတွေလည်းရှိပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ နဲ့ ဒီနေရာမှာ အင်စတော်လာတွေ စုစည်းထားတတ်ပါတယ်။ ဒါတွေက ကျနော်ရှာတွေ့တာပဲ ပြောတာပါ။ စိတ်ဝင်တစားရှာဖွေလိုက်ရင် အလွယ်တကူ ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ အဲ.. ချက်တင်လုပ်ချင်ရင်လည်း ဂျီတော့လို အသုံးပြုစရာတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
မြန်မာတချို့တွေဖန်တီးထားတဲ့ အူဘွန်းတူးဆိုဒ်လည်း ရှိပါတယ်။ Ubuntu For Myanmar ဆိုတဲ့ ဆိုဒ်ကလေးပါ။
အူဘွန်းတူးရဲ့ တရားဝင်ဝက်ဆိုဒ်ကတော့ ဒီမှာပါ။ အိုအက်စ်ကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး အသုံးပြုနိုင်သလို၊ ဒေါင်းလုပ်ချပြီးသားလူတွေဆီကနေလည်း တောင်းယူသုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကလည်း အမြဲတမ်းအလကားပေးမယ်လို့လည်း ပြောထားပါတယ်။ Netbook တွေအတွက်လည်း အိုအက်စ်သီးသန့်ရှိသလို Server Edition လည်းရှိပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ စေတန်ဂေါ့ရေးထားတဲ့ အူဘွန်းတူးအင်စတောလုပ်ပုံ စာအုပ်ရှိပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ Ubuntu Linux နဲ့ သူ့အမျိုးတွေအကြောင်း တစေ့တစောင်း ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ စာတပုဒ်တွေ့ပါတယ်။ မြန်မာလိုရေးထားတာပါ။ သူ့ကိုဖတ်လိုက်ရင်လည်း အူဘွန်းတူးကို ပိုပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သိသွားပါလိမ့်မယ်။ သူ့ဆီမှာပဲ ဇော်ဂျီကီးဘုတ် အင်စတောလုပ်တာကို ရေးထားပါသေးတယ်။ ဒီမှာ ဖတ်ပြီး ဖောင့်ကိုလည်း အင်စတောလုပ်နိုင်ပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ ပြောရရင် - ကွန်ပြူတာတော့ ဝယ်နိုင်ပါတယ်၊ အိုအက်စ် နဲ့ အခြား အသုံးပြုပရိုဂရမ်တွေကို မဝယ်နိုင်ဘူးကွာ၊ ပိုင်းရိတ်ဗားရှင်းတွေလည်း မသုံးချင်ဘူးဆိုရင်တော့ အူဘွန်းတူးကိုပဲ သုံးဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက ကေဇက် at 2:33 AM
ဒီကဏ္ဍအောက်မှာ ဖတ်အုံးမယ်ဆိုရင် သုတ ပန်းခင်း, အသုံးချသိပ္ပံ, ကေဇက်
အလုပ် ဆိုတာ ဒါပါပဲ။
ဒါ ... အလုပ် လုပ်တာပါပဲ။............။
Love Marriage??? Arranged Marriage???